Sainzi akabatsira kurwira Sars aids COVID-19 kurwa | Chokwadi cheGlobal
Cheng Jing, musayendisiti ane timu yakagadzira yekutanga yeDNA "chip" yeChina kuti ione SARS makore gumi nemaviri apfuura, ari kubatsira zvakanyanya muhondo yekurwisa kubuda kweCCIDID-19.
Pasati papera svondo rimwe chete, akatungamira timu kugadzira kititi yaigona kuwana panguva imwechete hutachiona hwekufema, kusanganisira COVID-19, nekusangana nezvinodiwa zvekuongororwa kwechirwere.
Akazvarwa muna 1963, Cheng, mutungamiri weHurumende-akabata bioscience kambani CapitalBio Corp, mumiriri weNational People's Congress uye mudzidzi weChinese Academy of Engineering.
Musi waJan 31, Cheng akawana runhare kubva kuZhong Nanshan, nyanzvi yezvekufema chirwere, nezvezviitiko zvechipfuva checonavirus pneumonia, zvichitaurwa nesainzi neScience neTekinoroji Daily.
Zhong yakamuudza nezvekunetseka muzvipatara zvine chekutarisa testic acid.
Zviratidzo zveCCIDID-19 uye furu yakafanana, iyo yakaita kuti kupimwa kwakakodzera kunyanyo kukosha.
Kuziva hutachiona nekukasira kuitira kuti vasarudze varwere kuti vawedzere kurapwa uye kuderedza hutachiona kwakakosha kuitira kudzora kubuda.
Muchokwadi, Cheng akange atogadzira timu yekutsvaga muyedzo paiyo coronavirus isati yatambira foni kubva kuZhong.
Pakutanga chaiko, Cheng akatungamira timu kubva kuTsinghua University uye kambani kuti vagare paLab masikati nousiku, vachiita zvizere kweminiti yega yega kugadzira iyo itsva Chip Chip uye yekushandisa mudziyo.
Cheng aiwanzova nema noodles apapo pakudya kwemanheru panguva yacho. Akauya nemikwende yake zuva nezuva kuti agadzirire kuenda kuhondo "mune mamwe maguta.
"Zvakatitora vhiki mbiri kugadzira iyo michipu yeDSS muna 2003. Panguva ino, takapedza zvisingasvike vhiki," akadaro Cheng.
"Pasina hupfumi hweruzivo rwatakaunganidza mumakore apfuura nerubatsiro rwekuenderera mberi kubva kunyika ino chikamu, tingadai tisina kupedza chirongwa nekukurumidza."
Chip iyo yakashandiswa kuyedza hutachiona hweSARS yaida maawa matanhatu kuti uwane mhinduro. Iye zvino, iyo chip nyowani yekambani inogona kuyedza ma virus 19 ekufema panguva imwechete mukati mehafu imwe chete nehafu.
Kunyangwe iro timu rakapfupisa nguva yekutsvaga nekuvandudza chip uye yekuedza kifaa, maitiro ekubvumidza haana kurerutswa uye kunyatsoita kwacho hakuna kuderedzwa zvachose.
Cheng akasangana nezvipatara zvina kuti zvivhenekwe mukiriniki, ukuwo indasitiri yemaitiro matatu.
"Takagadzikana zvakapfuura nguva yekupedzisira, takatarisana nedenda," Cheng akadaro. "Kana tichienzanisa na2003, kugona kwedu kutsvagiridza, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye hunyanzvi hwekugadzira zvinhu zvese zvakavandudza zvakawanda."
PaFebhu 22, kititi yakagadziriswa nechikwata chakabvumidzwa neNational Medical Products Administration uye nekukurumidza yakashandiswa pamutsetse wepamberi.
Musi waMbudzi 2, Mutungamiri Xi Jinping akaongorora Beijing yekutarisira kwechirwere uye kudzivirira kwesainzi. Cheng akapa chirevo chemaminitsi makumi maviri nezvekushandiswa kwetekinoroji nyoro mukudzivirira kwechirwere uye izvo zvakawanikwa zvekutsvagisa hutachiona hwekuwana hutachiona.
Yakatangwa muna 2000, iyo CapitalBio Corp's main subsidiary CapitalBio Technology yaive muBeijing Economic-Technological Development Area, kana Beijing E-Town.
Makambani anosvika makumi matatu ari munzvimbo iyi vakapinda muhondo zvakananga kurwisa chirwere ichi nekugadzira uye kugadzira nzvimbo dzakadai semishini yekufema, marobhoti ekuunganidza ropa, michina yekuchenesa ropa, CT scan zvivakwa nemishonga.
Pakati pezvikamu zviviri zvegore rino, Cheng akataura kuti nyika ikurumidze kuiswa kwehunyanzvi hwehungwaru pazvirwere zvikuru zvinotapukira zvinotapukira, zvinokurumidza kuendesa ruzivo nezvechirwere ichi nevarwere kuzviremera.